London ilaa Nottingham, Tareen, Bus, ama Car
Yurub England London
Sida Loo Helo Laga Helo London ilaa Nottingham
Waa kuwan sida loo safrayo London ilaa Nottingham wax badan oo ka badan raadinta Robin Hood.
Dadka intooda badan way ogyihiin in Robin Hood iyo raggiisa Merry ay ka soo baxeen duleedka Nottingham ee Sherwood Forest. Laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo magaaladan ah (kaliya 128 mayl waqooyiga London) marka loo eego Robin Hood, Sherwood Forest iyo Shaydaankii shaydaanka ee Nottingham. Ma ogtahay, tusaale ahaan, in ay tahay goobta lagu magacaabo "Salvation Army"?
Ama in sheriff caan ah ay badanaa tahay haween (lix haween ah labaatankii sano ee la soo dhaafay tan iyo 1997, iyo, wixii aan maqalnay, ma ahan kuwa shaydaanka ah).
Maanta magaaladan yaryari waxay guriga u tahay:
mid ka mid ah jaamacadaha ugu horreeya dunida
eedaysanaha cinwaanka hoyga ugu da'da weyn ee England, Ye Old Trip ee Yeruusaalem, oo leh maqaasiinka godadka ku yaala dhismaha Nottingham Castle ee 1065
ugu dambeyntii ganacsiga Nottingham dhirta ganacsiga, oo bixiya warshadaha casriga ah ee lagu dhejiyo mashiinka antique.
Haddii aad u socotid Park Peak District National Park ama booqashada magaalooyinka Midlands, waxay ka dhigtaa saldhig wanaagsan ama maalin nasasho leh. Halkan sida loo helo -
Dayactirka Dab-demiska: Dab-bakhti weyn oo dhacay Janaayo 12, 2018, ayaa sababay dhaawac culus oo Nottingham Station ah. Dhamaadkii bishii Jannaayo, tareenadu waxay u socdeen jadwalka, laakiin waxaa jiray khalkhal gelinta xarumaha rakaabka ee agagaarka Platform 7, halkaasoo dabku ahaa midkii ugu xumaa.
East Midland Tareenada waxay si toos ah u adeegaan Nottingham Station oo ka socda St Pancras International London 15 daqiiqo iyo 29 daqiiqo kadib saacadda. Safarku wuxuu qaadaa qiyaastii 1h40m. Waxay sidoo kale bixiyaan adeeg saacad ah, 26 daqiiqo ka dib saacad kasta, taas oo u baahan tareenada isbeddelaya mid ka mid ah saldhigyo kala duwan.
Safarkan wuxuu qaadanayaa qiyaastii isla mar ahaantaana wax farqi ah kuma yeelanayo qiimaha. Heerka ugu sareeya, ee ugu sareeya, safarka hore ee safarka - oo ku salaysan iibsashada laba tikidh oo keliya (hal mar) tikidhada ugu hooseeya waxay u bilaabmaysaa £ 31, iyadoo ku xiran tareenka aad qaadatid. Laakiin si taxadar leh u dooro sababtoo ah waxay u kici kartaa in ka badan £ 100. Xaqiiqdii, qiimaha u dhaxeeya Nottingham iyo London 2018 waa mid aad u adag oo kala duwan.
Sida Loo Helo Lacagta Tareenka ee ugu Fiican
Socdaalka safarka ee socdaalka iyo safarada iyo dhammaan noocyada kala duwan ee dabiiciga ah ayaa kaa dhigi kara waali. Nasiib wanaag, waxaa jira kombuyuutar loo yaqaan "Speed ​​Inquiry Tusker" si loo caawiyo. Habka ugu fiican ee loo isticmaalo waa inaad noqotaa mid isbedbeddel leh oo ku saabsan waqtiga aad safri karto. Kadib markaad soo gashay taariikhaha iyo meelaha, waxaad leedahay doorasho inaad soo gasho maalinta aad rabto inaad timaaddo ama baxdo. Fasax ka tag. Midigta midigta sanduuqan, waa sanduuq sax ah oo aad dooran kartid "All Day". Dooro taas oo waxaa laguu sheegi doonaa qiimaha ugu jaban ee suurtogalka ah.
Akhri Faahfaahin dheeraad ah oo kusaabsan tareenka socdaalka ee UK
Qorshee safar la soco Qorshaha Socdaalka Wadooyinka ee Qaran
Book Ticket for UK
National Express waxay qabataa adeega baska caadiga ah, qiyaastii saacad ahaan, inta u dhaxaysa Stationka Tababaraha London Victoria iyo Xarunta Tababarka Nottingham.
Socdaalku wuxuu qaadanayaa 3 saac 30min, iyada oo horey u iibsaneyso, tikidhada safarka ee wareega 2018, oo laga bilaabo qiyaastii £ 10 markii la iibsaday laba tikniko ah (hal mar).
Ka akhri safarka baska ee UK
Tikidhada basaska ee UK
Nidaamka Safarka ee UK National Express wuxuu bixiyaa tiro xadidan oo ah "tikidhada" tikidhada tigidhada ah oo aad u jaban. Kuwani waxaa laga iibsan karaa oo keliya khadka waxaana badanaa lagu dhajiyaa website-ka bil kasta illaa dhowr asbuuc ka hor safarka. Haddii aad noqon karto dabacsanaan ku saabsan waqtiga iyo maalinta safarka, waxaad ku keydsan kartaa xirmo. Fiiri bogga internetka ee "National Express" ee bogga internetka.
Nottingham waa 128 miles waqooyiga London iyadoo loo marayo M1 iyo A543. Waxay qaadataa ilaa 3 saacadood iyo 40 daqiiqo si loo kaxeeyo, laakiin waxay qaadan kartaa waqti dheer maxaa yeelay M1, sida caadiga ah waa lagu xirxiray loriyada laydhka leh, waa mid ka mid ah waddooyinka ugu fudud ee England.
Sidoo kale maskaxda ku hay in shidaal, oo loo yaqaan batroolka UK, lagu iibiyo litr (wax yar oo ka badan rubuc) qiimaha badanaaba ka badan yahay $ 1.50 quart.
Isticmaal Qorshaha Route Route Association si aad u gasho jidka ay la socdaan jajabyada iyo saldhigyada gaaska.
Saar Qiimaha Batroolka (Gasoline)
Guryaha Imperial College College
Suuqa Brick Lane ee Banglatown London
8 Dhacdooyin aan la xiqin oo London ku yaal
Qolka Madadaalada ee Wallace Restaurant
Xarunta ugu weyn ee dukaamada Britain ee Westfield London
Toban Waxyaabaha La Sameynayo Ubud, Bali
RV Travel Pros iyo Cons
REI taariikhda taariikhiga ah ee Uline Arena ee Washington DC
Waxa 50 Cunugood ee Hoose ee Southside Queens
Matxafka Qaranka ee taariikhda dabiiciga ah ee Smithsonian
Warqad Vs. Duubyada elektarooniga
Xaflado bilaash ah oo lagu qabto Monona Terrace
10 Adult Movie, Novelty, iyo Dukaamada Lingerie ee Greater Phoenix
Campeche: Mid ka mid ah xeebaha ugu fiican ee Florianopolis
Soojiidashada Dhaqdhaqaaqyada Wanaagsan ee London
Socdaal Safar Safarka ah oo leh Austin Adventures
Pride Fort Lauderdale xeebta 2018